समृद्धिको आलाप र असहज परिदृश्य : उखानटुक्काले हँसाउन सकिन्छ, खुशी सम्भव हुँदैन | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण समृद्धिको आलाप र असहज परिदृश्य : उखानटुक्काले हँसाउन सकिन्छ, खुशी सम्भव हुँदैन
on: २५ माघ २०७५, शुक्रबार ०५:०६ लेख | दृष्टिकोण
समृद्धिको आलाप र असहज परिदृश्य : उखानटुक्काले हँसाउन सकिन्छ, खुशी सम्भव हुँदैन
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने निजीक्षेत्र अहिले आन्दोलनको मुडमा छ । मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रका उद्यमी व्यवसायी आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सधैंजसो आन्दोलन र बन्दहडतालको विरोध गर्ने उद्योगी व्यवसायी उद्योग व्यापार बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन्, किन ? यो उद्योग व्यापार गर्ने वातावरण कमजोर बन्दै गएको गतिलो प्रमाणबाहेक अन्य होइन । एकातिर सरकार लगानी आकर्षणका लागि लगानी सम्मेलनको तारतम्यमा जुटेको छ । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्छ । उद्योगी व्यवसायी भने काम गरिखाने वातावरण नभएको भन्दै त्यसको प्रत्याभूतिको मागसहित सडकमै उत्रिनु परेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको ब्याज आतंक त परिदृश्यमा बढी प्रकट भएको विषयमात्र हो । केलाएर हेर्ने हो भने सरकारका कुन यस्ता नीतिनियम कानून छन्, जसमा निजीक्षेत्रको असहमति र आपत्ति नहोओस् ? सरकार लगानीमैत्री वातावरणको दाबी गरिरहने, तर जसका लागि त्यो वातावरण बनेको भनिएको हो त्यो पक्ष नीतिगत व्यवस्थाप्रति सशंकित भइरहने अवस्थाले हामीले कल्पना गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सम्भावनालाई कदापि संकेत गरिरहेको छैन ।
विकासका योजनाको कार्यान्वयन अति कमजोर छ । जसलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना भनिएको तिनै योजनाको गति हेर्ने हो भने गौरव हुन् कि लज्जाको विषय भन्ने स्वभाविक प्रश्न उपन्न हुन्छ । योजनाको कमजोर कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसै त विकास निर्माणको सीमित स्रोत, त्यहिँमाथि कार्यान्वयनमा चरम कमजोरीले विकासले गति समात्न सकेको छैन । कतिपय योजना ३ दशकभन्दा पुराना छन् । यसबीचमा यस्ता योजनाको लागत दोब्बर भइसकेको छ । तर, योजनाको औचित्य र प्रभावकारिताको ओज कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले यो यथार्थलाई नबुझेको त होइन होला । तर, पनि यस्ता योजनालाई न चाँडै पूरा गर्नेतर्पm न गतिलो प्रयास भएको छ, न बालुवामा पानी खन्याए जसरी लगानी खन्याउन नै छोडिएको छ । यसले यस्ता योजनाबाट लाभ लिने सम्भावनालाई नजिक ल्याएको छैन, बरू अन्य अत्यावश्यकीय योजनासमेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । सरकारको कमजोर खर्च प्रणाली र न्यून क्षमताको कारण कुल बजेटको १५ प्रतिशत हाराहारी विनियोजन हुने विकास बजेटसमेत आधा परिमाणमात्रै खर्च हुन्छ । त्यो पनि वर्षको अन्तिममा समयमा । वर्षको अन्तिम महीनामा खर्चको चटारोभित्रका कुत्सित उद्देश्य र विकसका न्यून गुणस्तरले कस्तो समृद्धि र सुखलाई संकेत गरिरहेको हुन्छ ? अनुमान असहज छैन । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई वित्तीय र अन्य आर्थिक अराजकतामा कमजोरी छोप्ने आवरण बनाइएको छ । हो, सरकारी रकम खर्च भएर बजारमा नआउँदा तरलताको अभाव हुन्छ । जुन अभावको ओज र त्यसका आयामहरू देखिएका छन्, त्यो सरकारी बजेट खर्चमा आएको कमीका कारणमात्र भएको नहुन सक्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका अन्य औजारहरू नभएका होइनन्, तर यत्तिकै मनग्य आय आर्जन गर्न पाइएको छ भने अरू उपायमा गएर किन टाउको दुखाउने, भन्ने मनोवृत्तिले निकासप्रति चरम बेवास्ता उत्पादन भइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बताइरहेको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर ल्याएका नीतिनियममा निजीक्षेत्रको व्यापक असन्तोष र आशंका देख्न पाइएको छ । श्रम ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बोनस ऐन, तहगत सरकारका कर संकलनमा अव्यवहारिक र अवैधानिक तरीका लगायत जति पनि कानूनी र कार्यान्वयनका प्रवाधान आएका छन् । त्यस्ता ऐन कानूनमा निजीक्षेत्रले तीव्र असन्तोष देखाइरहेको छ । सरकारले लगानीमैत्री नीतिनियमको दाबी कसिररहँदा निजीक्षेत्रको यस्तो असन्तोषले के संकेत गर्छ ? स्वदेशकै निजीक्षेत्र सरकारसित सशंकित भइरहेको सन्दर्भमा बाहिरको लगानीकर्ताले कुन आधार देखेर लगानी बोकेर आउँला ? बाहिरकाले स्वदेशकै लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका अध्ययन अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हुन् । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश–२०१९ को प्रतिवेदनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई ५ स्थान तल झारेर ११० औं स्थानमा राखिदिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यावसायिक वातावरण खस्किएको अवस्था हो । नेपालको लक्षित समृद्धिका लागि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विश्व समुदायलाई लगानीको वातावरण सुध्रिएको बताइरहेको छ । तर, मुख्य विकास साझेदारले सरकारी दाबीलाई झूटो सावित गरिदिएको छ । भ्रष्टाचार, महँगो पूँजी, अपर्याप्त र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर अराजकताजस्ता पक्ष विश्व बैंकले औंल्याएको तथ्यमात्र होइन, अहिले स्वदेशका निजीक्षेत्रले भोगिरहेको धरातलीय यथार्थ पनि हो । हालै ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकांकमा पनि नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छैन । सरकारको काम यस्ता नकारात्मक तथ्य सुधारको सट्टा प्रतिवेदनमा असन्तोष र आक्रोश ओकल्नेतर्फ बढी उद्यत देखिनु विडम्बना हो । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश प्रतिवेदनमा सरकारले आपत्ति जनाएपछि विश्व बैंकको मिशन आएको थियो । तर, उसले प्रतिवेदनमा होइन, सरकारको शैलीमा सुधारका तरीका सुझाएर फर्कियो । सरकारको अहिलेको बोली र तौरतरीकाले नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।
यस्ता असहजताका कारण आन्तरिक उत्पादकत्व निरन्तर घटिरहेको छ । व्यापारघाटाको आँकडा बढेर निर्यातको तुलनामा आयात १ः१५ को अनुपातमा झरिसकेको छ । उत्पादन अभिवृद्धि अनिवार्य छ । तर, यसका पर्याप्त आधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन भनिरहँदा कुनकुन क्षेत्रमा सम्भाव्यता छ ? त्यसको निक्र्योल नभई गरिने लगानीले दीर्घकालीन फाइदा पुग्न सक्दैन ।
केन्द्रीकृत शासनका बेथितिको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको संघीयता र बलियो राजनीतिक सत्ता राजनीतिका कारण विकास र समृद्धिको लक्ष्य सहज हुने आम अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, संघीयता अभ्यासको १ वर्षका औसत आयामहरू आशलाग्दा नहुनुले आम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने संकेत देखा परिरहेको छैन । अर्थराजनीतिक अवसरको आधार भनिएको सङ्घीयताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आपसी आरोपप्रत्यारोपमा खुम्चिएका छन् । संघीयताको मूल आधारस्तम्भ मानिएका प्रदेश सरकार संघीय सरकारको शाखा कार्यालयभन्दा अन्य लाग्न छोडेका छन् । संघीय सरकारले स्रोतमा होइन, अधिकारमा समेत कन्जुसी गरेको आक्रोशमिश्रित गुनासो प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूको मुखबाट सार्वजनिक सभासमारोहमै सुन्न पाइन्छ । यसले संघीयताको अभ्यासलाई सुखद र अपेक्षित लक्ष्यमुखी बनाउन मद्दत गर्दैन । यस्ता विवादको निरूपणविना आर्थिक विकासका उपाय र आयाम फराकिलो हुने सम्भावना देखिँदैन । समस्या नै सम्भावनाका आधार पहिल्याउने विन्दु पनि हुन् । तर, समस्यालाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्ने कि त्यसलाई गिजोलेर झन् विकृत बनाउने भन्ने नेतृत्वको सोच र चरित्रमा भरपर्ने विषय हो ।
देशमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ । साँच्चै सुधार चाहने हो भने अवरोध बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, सरकार बनेको १ वर्ष पूरा हुन लागिसक्दा समेत यो अपेक्षाको पूर्णतामा आशावादी हुने स्पष्ट आधारसमेत देख्न पाइएको छैन । सत्ता सञ्चालकमा विस्तार भइरहेको दम्भ र एकाध सतही स्टन्टबाजीबाहेक सरकारले भन्ने गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आधार निर्माणको आभास हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा लहड र उट्पटाङ बोली व्यवहारले आउने कुरा होइन । उखान टुक्काको जोडबलमा जनतालाई केहीबेर हँसाउन मात्र सकिन्छ, खुशी दिन सम्भव हुँदैन । उपलब्धिका लागि त प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा देखिएको फरक आचरणको निदान अपरिहार्य छ ।
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०७:३५
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०६:२७
‘समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता’
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०८:३४
भियतनाम : आर्थिक विकासको रोल मोडल
२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०५:०६